चन्दञ्मामा ६५५ घण्टाको एक दिन - Desh Post
चन्दञ्मामा ६५५ घण्टाको एक दिन
२८ पुष २०७७, मंगलवार ०८:५० मा प्रकाशित (3 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ४ मिनेट
देशपाेष्ट/काठमाण्डाैं । तपाईं हामी सबैलाई थाहा भएकै कुराहो कि पृथ्वीमा २४ घण्टाको एक दिन हुन्छ, तर के तपाईलाई थाहा छ ? चन्द्रमामा कति घण्टाकाे एक दिन हुन्छ ? धेरैलाइई थाहा छैन हाेला कि चन्द्रमामा ६५५ घण्टाकाे एक दिन हुन्छ भनेर । हाे चन्द्रमामा ६५५ घण्टाकाे एक दिन हुन्छ ।